Laptọọpụ kacha mma maka ojiji ọ bụla: ịmụ ihe, ịrụ ọrụ, idezi ...
Laptọọpụ dị ka ojiji si dị
Ụdị laptọọpụ, ngalaba nhazi, ikike ebe nchekwa, ụdị ihuenyo, ikike batrị, njikọta, sistemụ arụmọrụ, wdg. ọtụtụ paramita iji mee nhọrọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ị na-adịghị teknuzu ọmụma. Ya mere, na-ekewa ndị laptọọpụ dị ka ojiji ha, ị nwere ike ịga na udi nke kacha mma gị.
Ọ bụghị ndị ọrụ niile chọrọ otu ihe ahụYa mere, ị nwere ike ilekwasị anya n'ụdị ngalaba ị nọ na ya. Dịka ọmụmaatụ, ịchọta kọmpụta dị ọnụ ala na nke kwụsiri ike maka ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụ ndị nwere arụmọrụ eserese ka mma maka ndị na-emepụta ihe, ndị nwere njiri mara mma maka mmepe, na ntụkwasị obi ka mma maka gburugburu azụmahịa, wdg.
Ụmụ akwụkwọ bụ otu ndị ọrụ pụrụ iche. Ha chọrọ a ikpo okwu siri ike, nchekwa na kwụsiri ike. Ahapụla ha ịgha ụgha n'oge ule ma ọ bụ na-eji ọkara ọrụ. Ya mere, ha chọrọ akụrụngwa akọwapụtara nke ọma na-emezu ihe ndị a niile.
Kama, enweghị ọrụ, ha chọkwara ndị otu a ka ha nwee njirimara ọzọ dị mkpa: ọnụ ahịa na-agafeghị oke. Ijikọta njirimara gara aga na nke ọzọ adịghị mfe, mana enwere ọtụtụ ụdị dabara nke ọma ihe ị tụrụ anya ya.
Hụ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ niile
Maka imewe eserese
Ndị na-ese ihe eserese chọrọ kọmpụta akwụkwọ ndetu na-arụ ọrụ nke ọma iji bugharịa ya edezi software, nke na-adịghị adịkarị mfe mmemme. N'aka nke ọzọ, ha chọkwara ebe dị mma ma kwụsie ike iji rụọ ọrụ ha.
Nke a pụtakwara na ha nwere ihuenyo nha dị mma, ka ị nwee ike ịhụ nke ọma nkọwa niile nke ihe oyiyi a na-edezi, nakwa na ọ nwere àgwà zuru oke nke mere na agba bụ ihe kachasị mma, mkpebi na njupụta pixel dị elu, yana ezigbo nkọ.
Hụ laptọọpụ niile maka imewe eserese
Maka ndezi vidiyo
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịpụta na video editọ ma ọ bụ 3D imewe ha chọrọ otu ihe ahụ dị ka ndị na-ese foto ma ọ bụ ndị editọ foto, ha adịghị. Akụrụngwa nke ndị a na-adịkarị ka n'ihe gbasara njirimara n'oge edezi, mana ihe na-agbanwe mgbe ha malitere site na nsụgharị ma ọ bụ ntinye vidiyo.
Ọrụ ndị a chọrọ ngwaike dị ikena ma CPU na GPU n'akụkụ, yana RAM nke a na-anakwere na ohere diski ike zuru ezu iji chekwaa nnukwu faịlụ ndị ọrụ ndị a na-ebute (karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ na 4K). Na mgbakwunye na nke ahụ, njirimara ndị ọzọ, dị ka ihuenyo, nwere ike bụrụ ndị na-emepụta ihe nkiri ...
Hụ kọmpụta niile maka ndezi vidiyo
na ndị na-emepụta software, Ha na-achọkwa akụrụngwa nwere ihuenyo dị mma, ka ha nwee ike ilele koodu ahụ n'ụzọ dị mma karị. Mana ọ dịkwa mkpa na ha nwere ahụigodo dị mma iji were ọtụtụ awa tinye koodu.
N'oge nchịkọtaỌ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na asụsụ mmemme na-akọwaghị, ị ga-achọ ezigbo processor ka ọ ghara iwepụta ogologo oge iji mepụta ọnụọgụ abụọ. Maka nke a, ọ ka mma inwe ọtụtụ cores.
Hụ kọmpụta niile maka mmemme
ASUS ZenBook 13…
Ndị chọrọ a laptọọpụ ịrụ ọrụ, ha ga-achọ otu ndị na-egbo mkpa arụmọrụ nke software eji maka ọrụ ahụ. Mana otu ndị nwere njirimara akọwapụtara nke ọma nwere ike ọ gaghị adị mkpa n'ọnọdụ ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, nchekwa, ntụkwasị obi, ịdị mma na nkwụsi ike ha na-aghọkwa ezigbo mkpa. Ya mere, ị kwesịrị ịma ụfọdụ usoro pụrụ iche maka gburugburu azụmahịa na-enye gị ụfọdụ ihe mgbakwunye na-adọrọ mmasị, dị ka Windows 10 Pro version, ọbụnadị ụdị Kesington, wdg.
Hụ kọmpụta niile maka ọrụ
Na-achọ laptọọpụ kacha mma maka mmemme? Chọpụta ndị na-aga ime nke ọma na ọnụ ala iji dee koodu n'ụzọ kwụsiri ike na nke dị ntụsara ahụ.
Tulee ya na kọmpụta kacha mma maka ụmụ akwụkwọ n'afọ a. Họrọ nke kacha dabara mkpa na mmefu ego gị iji gaa mahadum, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ kọleji
Ọ bụrụ na ị ga-azụta kọmpụta mbụ nwata, họrọ nke ọma. Ndụmọdụ na ụdị laptọọpụ ndị akwadoro maka ụmụaka
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta laptọọpụ maka imewe eserese dị ọnụ ala yana ọnụ ahịa dị mma, na ntụnyere emelitere a, ị ga-ahụ nke kacha mma.
Ị na-achọ laptọọpụ ka ọ rụọ ọrụ nke na-adịghị enye gị nsogbu, a pụrụ ịdabere na ya na ngwa ngwa? Chọpụta kọmpụta kacha mma ị ga-arụ ọrụ maka afọ a ebe a.
Na-achọ laptọọpụ maka ndezi vidiyo? Anyị na-egosi gị ụdị kachasị mma na njirimara ị ga-enwerịrị iji dezie vidiyo na-enweghị obi nkoropụ